एनआरएनएको अध्यक्षमा भट्ट र कोषाध्यक्षमा थापा विजयी — OnlineDabali
Posted on October 16, 2017 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अध्यक्षमा भवन भट्ट विजयी भएका छन् ।
सोमबार भएको मतदानमा भट्टले प्रतिस्पर्धी जमुना घले गुरुङलाई दोब्बर मतको अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् ।
भट्टले ११ सय ९७ मत प्राप्त गर्दा गुरुङले भने ५ सय ८४ मत मात्र प्राप्त गरिन । १८५४ मध्ये १७८८ मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
उपाध्यक्षमा कुमारप्रसाद पन्त र कुल आचार्य विजयी भएका छन् । दुई उपाध्यक्षको लागि ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसैगरी महिला उपाध्यक्ष सपिला राजभण्डारी विजयी भएकी छन् । महासचिवमा डा. बद्रि केसी पुनः निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी सचिवका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा डबरबहादुर क्षेत्री र जानकी गुरुङ विजयी भएका छन् । कोषध्यक्षमा दोस्रो पटक हिक्मतबहादुर थापा बिजयी भएका छन् भने सह–कोषाध्यक्षमा सोमनाथ सापकोटा बिजयी भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
महिला संयोजकमा भूमादेवी लिम्बु निर्वाचित भएकी छन् भने युवा संयोजकमा सुदन थापाले बाजी मारेका छन् ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनमा २१ जनाको कार्यसमिति हुन्छ । उक्त समिति भित्र छ वटा क्षेत्रिय, महिला र युवा समितिको संयोजक र उपसंयोजक रहने व्याबस्था छ । एनआरएनएले ७८ ओटा देशमा संजाल विस्तार गरेको बताएपनि सम्मेलनमा ६० देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
चुनावको मुखमा विप्लवले के निर्देशन दिए थबाङीलाई ?
Posted in प्रवास, मुख्य खबर | Leaveareply
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्झौताविपरीत, प्रस्तावनामै असन्तुष्टि
बैदेशिक रोजगारका लागि जापान खुल्ला, नेपालीसहित ११ मुलुकबाट कामदार लैजाने
अस्ट्रेलियन नेताद्धारा बुद्ध र सगरमाथाको देश भ्रमण गर्न आग्रह (भिडियो सहित)
मलेसिया रोजगारीका लागि जाने बाटो खुल्दै
एनआरएनए स्कटल्याण्डको नयाँ कार्यसमितिको सपथ ग्रहण
नेकपाको विशाल जनसभामा प्रवासबाटै एक्येवद्धता, सहभागीप्रति अाभार (विज्ञप्तिसहित)
कोरियामा मानार्थ नागरिकता पाए तेक्वान्दो खेलाडी क्षेत्री